Guddida Komishanka Doorashooyinka Oo Ka Warbixiyay Halka Ay Marayso Hawsha Diiwaangalinta Codbixiyayaasha+sawiro |
Guddida Komishanka Doorashooyinka Oo Ka Warbixiyay Halka Ay Marayso Hawsha Diiwaangalinta Codbixiyayaasha+sawiro
Hargeysa(GNN)-Sida aynu la wada socono waxa dalka hadda ka hirgaley bilawgii hawshia Diiwaangelinta cod bixiyayaasha Somaliland oo ka bilaabantey Gobolka Togdheer bishii January 16 keedii, waxaney Gobalka ka soo xidhantay 12kii bishan Febuary 2016.
Isla bishan February 13keedii waxay Diiwangelintu ka bilaabantey Gobolka Awdal, waxaanay ka socondoontaa miyiga muddo dhan todobo casho iyo 21maalmood oo ka socon doonto degmooyinka gobolka taas oo isugeen dhan mudda ah 28 Maalmood. Sidaas baanay uga qabsontay gobalka Togdheer ugana qabsoomi doontaa Gobol walba oo ka mid ah lixdii Gobo lee kala ah Togdheer, Awdal, Saaxil, Maroodijeex, Sanaag iyo Sool.
Diiwangelinta hadda socotaa maaha middi ugu horeysey ee dalka laga qabto ee waxa jirtey mid la sameeyey 2008/2009 oo la kulantey dhibaatooyin fara badan oo ay ka mid ahaayeen qaraxyadii dhacey oktobar 2008markii diiwangelintu bilaabentey oo khubaradii farsamo ee hawsha inala wadi lahaa ay dalka ka baxeen wax bedel ahna loo waayey. Waxa kale oo ay la kulantey biseel la’aan siyaasadeed, tartan qabyaaladeed iyo tartan Gobol iyo Degmo. Waxaas oo is biirsadey ayaa saldig u ahaa waxyaalihi ay diiwangelintaas u noqon weydey marjac assaas u noqda diiwaangelinta codbixiyayaasha.
Waxaynu manta mar labaad nasiib u yeelaney in Dawladaha Deeqbixiyayaasha ay garawsadaan durufihii ay diiwangelintii hore la kulantey oo lagu galey doroshadii Madaxtooyada ee 2010 ee Xukuumada manta jirta xukunka kula waareegetey ayadoo si weyn oo qoto dheerna looga nadiifiyey ciladihii jiray. Waxaana laysla qatey in aan diiwangelintaas la isticmaalin xiligii la qabanayey doorashooyinka Dawladaha Hoose ee 2012kii diiwaangelin cusubna lagu galo dooroshada soo socat ee Madaxtooyada iyo baarlamaanka Somaliland ee laqaban doono taas hadda dhici doonta 2017ka.
Hanashada Diiwaangelin buuxda oo nadiifa, dalka oo dhanna laga qabtaa waxay shacbiga Somaliland u horseedeysaa gundhig iyo udub dhexaad lagu qiimeyn karo doorashooyinka dalka ka dhici doona. Isla markaas waxay tusmo u noqon kartaa qabashada doorashooyinka wakhtigooda oo ayana ah sansaan fiican oo la odhon karo in habkii siyaasadeed ee dimoqraadiyadu uu dalka ka hana qaadey xididana ku yeeshey joogteentiisa.
Innagoo ka duuleyna Diiwaangelinta hadda socota iyo dhameystirkeeda oo si habsami ah u qabsoonta wax la gudboon shacbiweynaha Somaliland ee Gobal iyo Degmo walba jooga, Xukuumada, Asxaabta siyaasada ee Qaranka , Komishanka qaranka, Hawlwadeenida Shaqada iyo dhamaanteen waxa lagama maarmaan ah in si xilkasnimo, daacad, iyo wadajir ah hawsha loo wada qabto si u dalkeenu u muujiyo in uu yahey iftiin ka bidhaamaya Geeska Africa oo mudan in lagu deydo.
Waxaana ka mid ah wax yaalaha dalku qabsadey kuwan so socda;
Dawladdoodii oo ay soo dhisteen una turxaan bixiyeen ayagoon wax kaalmo ah ka helin Calamka
Dadkooda oo ay aftii u qabteen kuna muujiyeen ayahood dadnimo iyo dawladnimo.markii 97% taageereen lasoo noqoshadee xornimadooda halawdey,
Qabatinkii doorashooyin isdaba jooga uu ka bilaabmey kii dawladaha hoose iyo ku ka denbeeyey ee. Barlimaanka Madaxweynayaasha
Heelanyiin in ay Qabtaan dooroshooyin xor iyo xalaal ah oo ku dhisan qofkasta oo qaan gaadha(16 jir)maalinta codeynta in u codkiisi u dhiibto si caddaan ah oon mugdi ku jirin.
Gebo Gebo waxaynu ku soo gunaanadeynaa in aynu maanta joogno wakhtigii caruur iyo ciroolaba looga baahnaa guda iyo dibedba in si cad oo kalsuuni ka muuqato loo taageero habsami u socodka hawsha diiwaangelinta, lagana ilaaliyo cadowga iyo calooshi u shaqeystaha raba in ceebo iyo xajiimo aan sal iyo raad toona laheyn lala dabo galo komishanka qaranka oo si habsami ah u wada hawshii loo igmaday.
NEC PR & media Office